June 11, 2021 N88LeaveaComment on नरोत्तम वैद्यले के भनेका थिए प्रदेश सभामा ? ओलीको हत्या गर्ने भनेकै हुन् हेर्नुस् पूरा भिडियाे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर सर्वत्र आलोचना र बिरोध शुरु भएको छ । कांग्रेसले प्रधामन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष के पी ओलीको हत्या गर्ने योजना बनाएको भन्दै एमालेमा नेताहरुले चर्को बिरोध गरेका छन् । शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा केपी ओली स्वच्छाचारी ढङ्गले देश चलाएको बेलैमा तह […]
काठमाडौ। सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीमाथि भयानक षडयन्त्र हुन लागेको बताएका छन् । एक जना प्रदेश सांसदले बोलेको भन्दै केपी ओली नमारी कांग्रेसले नजित्ने रहेछ भन्ने विषयतर्फ संकेत गर्दै बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन् । यसरी बोल्ने ओली विरोधी गठबन्धनमै रहेका त सामेल छैनन् भन्दै बास्कोटाले प्रश्न उठाएका छन् […]
June 11, 2021 N88LeaveaComment on कोरोनाकाे खोपले शरीरलाई चुम्बक बनाएको दाबी, सिक्का, चम्चा, टाँसिए (भिडियाे)
काठमाडौं । कोरोना विरुद्धको खोपको असरका बारेमा कयौं जिज्ञासाहरु आइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरु खोप लगाएपछि ज्वरो आउनुका साथै शरीर दुखेको लगायतका सामान्य असर देखिएको बताइरहेका छन् भने केहीले खोप लगाएपछि कुनै असर नदेखाएको बताइरहेका छन् । तर भारत महाराष्ट्र पुणेका एक व्यक्तिले कोरोना खोप लगाएपछि आफ्नो शरीर चुम्बक जस्तै भएको दावी गरेका छन् । […]
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै उनकै निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीलाई १२ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा […]
June 11, 2021 N88LeaveaComment on अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने केपी ओलीलाई सर्वोच्चको लगाम
संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने वर्तमान केपी ओली सरकारमाथी सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपती विद्यादेवी भन्डारी मिलेर दर्जनौ विषय अध्यादेश मार्फत ल्याएर मुलुकलाई बन्दी बनाएका थिए । बिहिबारको अदालतको आदेशसंगै ओलीलाई राजनैतिक झापट लागेको छ । प्रतिनीधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ । […]
June 11, 2021 N88LeaveaComment on संसद विघटन मुद्दा प्रभावित पार्ने यस्तो षडयन्त्र
काठमाडौं । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा प्रभावित पार्न चलखेल गरेका छन् । कहिले कानुन व्यवसायी त कहिले पूर्वसभामुखसँग छलफलको नाटक गरेर विघटन मुद्दाको सनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका सभामुखले आज दलका नेताहरुलाई उचाल्ने तयारी गरेका छन् । विपक्षीहरु गठबन्धन बनाएर, अदालतलाई न्यायाधीश फेर्न लगाएर मुद्दामा दबाब र प्रभाव सिर्जना […]
कास्की । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गण्डकी प्रदेशकाे मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । आफूलाई ३१ सांसदको समर्थन रहेको भनी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष दावी पेश गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ , राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक […]
June 11, 2021 N88LeaveaComment on पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने यी १० रोग सूचीकृत गरियो, कसरी हुन्छ उपचार
काठमाडाैं । पशुपन्छीबाट मानिसमा सार्ने रोगलाई जुनोटिक रोग भनिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने १० रोगलाई प्राथमिकीकरणमा राखेको छ । मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाले प्रथम जुनोटिक रोगको प्राथमिकिरण राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीले पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने १० जुनोटिक रोगलाई प्राथमिकीकरणमा राख्ने निर्णय गरेको हो । महाशाखाका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलले पशुपन्छीबाट मानिसमा […]
विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाकाे खेलाेमेलाे के हाे ? विपक्षीसँग साँठगाँठ
June 11, 2021 June 11, 2021 N88LeaveaComment on विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाकाे खेलाेमेलाे के हाे ? विपक्षीसँग साँठगाँठ
काठमाडौं । सभामुख अग्नी सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक लगत्तै उनीसहित विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सभामुखसहितका शीर्ष नेताहरूको छलफल सुरु भएको हो । आजको सर्वददलीय बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको राप्रपाका नेता दीपक बोहोराले जानकारी दिए । सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई आफ्नो पार्टीले सम्मान गर्ने पनि उनले बताए […]
कुख्यात गुण्डा नाइके तथा कांग्रेस युवा नेता गणेश लामा रिहा
June 11, 2021 N88LeaveaComment on कुख्यात गुण्डा नाइके तथा कांग्रेस युवा नेता गणेश लामा रिहा
काठमाडौँ । निषेधाज्ञा उल्लंघन आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता गणेश लामा रिहा भएका छन् । विहीबार पोखराबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका लामालाई प्रहरीले छोडेको हो । याे पनि समाचार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अझै एक साता लम्ब्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘कोरोना संक्रमणदर उल्लेखनीय रूपमा नघटेको भन्दै निषेधाज्ञा थप एक […]